SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuIndia Myanmar Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Muna 2012, nyanzvi dzinoongorora matongo dzakachera dzikawana zvimedu zvidiki zvechirongo chine makore 3 000. Vatsvakurudzi vakafara chaizvo. Chii chakaita kuti vafare? Zvainge zvakanyorwa pazvimedu zvacho ndizvo zvakavafadza.
Nyanzvi dzinoongorora matongo padzakazokwanisa kubatanidza zvimedu zvacho, dzakakwanisa kuverenga mabhii echiKenani aiva pachirongo chacho. Chainge chakanyorwa kuti: “Eshba’al Ben Beda,” zvinoreva kuti “Eshbhaari mwanakomana waBhedha.” Aka ndekekutanga kuti nyanzvi dzinoongorora matongo dziwane zita iri rakanyorwa pachinhu chekare.
Zita rekuti Eshbhaari rinowanikwawo muBhaibheri. Mumwe wevanakomana vaMambo Sauro aiva nezita iroro. (1 Mak. 8:33; 9:39) Purofesa Yosef Garfinkel uyo aivapowo pakawanikwa chirongo chacho akati: “Zita rekuti Eshbhaari rinowanika muBhaibheri uye rava kuwanikwawo muzvinyorwa zvevanoongorora matongo. Zvese izvi zvinoratidza kuti zita iroro nderepanguva yaitonga Mambo Dhavhidhi.” Vamwe vanoti zita iroro raingoshandiswa panguva iyoyo chete. Uyu ndemumwe muenzaniso unoratidza kuti zvakawanika pakuongorora matongo zvinotsigira sei Bhaibheri.
Mune dzimwe ndima dzeBhaibheri, zita rekuti Eshbhaari rinonziwo Ishi-bhosheti. Chikamu chinoti “bhaari” chakatsiviwa nechinoti “bhosheti.” (2 Sam. 2:10) Nei zvakadaro? Vatsvakurudzi vanotsanangura kuti: “Mubhuku rechipiri raSamueri angangodaro akarega kushandisa zita rekuti Eshbhaari nekuti raiyeuchidza vaIsraeri nezvaBhaari, mwari wekunayisa mvura ainamatwa nevaKenani. Asi mubhuku rekutanga raMakoronike tinowana zita rekuti Eshbhaari.”